Tag: loharano | Martech Zone
Maninona ny mpamaky 20% ihany no mikitika ny lohatenin'ny lahatsoratrao
Alarobia, Oktobra 28, 2020 Alarobia, Oktobra 28, 2020 Douglas Karr
Lohateny, lohateny, lohateny, lohateny… izay tianao hiantsoana azy ireo, izy ireo no zava-dehibe indrindra amin'ny atiny rehetra atolotrao. Inona no zava-dehibe? Araka ity infografika Quicksprout ity, raha 80% ny olona mamaky lohateny, ny 20% amin'ny mpijery ihany no tena mikitika. Ny lohateny lohateny dia manakiana ny fanatsarana ny motera fikarohana ary ny lohateny lehibe dia ilaina amin'ny fampitana ny atiny amin'ny media sosialy. Fantatrao izao fa zava-dehibe ny lohateny, mety manontany tena ianao hoe inona
Delivra, mpamatsy varotra mailaka an'ny mpanjifanay, dia namorona rindrambaiko fotsy mampiseho ny maha-zava-dehibe ny tsindry iray satria mety ho ny mahasamihafa ny fanaovana ny varotra izany. Ny maha-zava-dehibe ny kitapom-batsy Click dia miresaka ny antony ao ambadiky ny tsindry tsirairay, ny tetika hanatsarana ny tahan'ny tsindry, ary ny fiainana ny fiainana tena izy mba hampahafantarana fa ny fahatakarana ny maha-zava-dehibe ny tsindry iray dia hanampy ny ezaky ny varotra mailaka ataon'ny orinasanao. Ny fiakaran'ny tahan'ny fipihana eo amin'ny marketing amin'ny mailakao dia a
Alatsinainy Oktobra 13, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ilay namako akaiky, Patric… aka Andriamatoa Noobie, dia manome Nintendo Wii! Patric dia mpinamana be amin'ny bilaogiko nandritra ny herintaona ary nanana kafe eran'ny kapoaka niaraka tamin'ny namanay tao amin'ny The Bean Cup izahay. Na dia mientanentana aza aho rehefa mahazo ireo gadget farany na teknolojia vaovao indrindra dia zava-dehibe ho ahy ny mahatadidy fa ny ampahany betsaka amin'ireo olona mitsidika ny tranokalako dia tsy manana famantarana.